Global Voices teny Malagasy · 5 Avrily 2008
05 Avrily 2008
Tantara tamin'ny 05 Avrily 2008
Zimbaboe: Vao nifarana ny fivorian'ny Zanu PF
Tselatra · Zimbaboe05 Avrily 2008
Vao nifarana ny fivorian'ny Zanu PF, hoy ny tatitry Fanantenana avy ao Zimbaboe : Naharay sms milaza fifaranan'ny ny fivorian'ny birao politika aho – fivoriana iray izay efa nolazain'ny fampahalalam-baovao fa hifantoka amin'ny olan'i Bob (Robert Mugabe). – Tsy misy zavatra hafa ankoatra izay.
Zimbaboe : Ampahafantarò amin'ny alalan'ny SMS ireo nofinofinao
Zimbaboe05 Avrily 2008
Amanda Atwood no manentana ireo Zimbaboeana ao amin'ny blaogin'ny kubatana.net hampahafantatra izay mba nofinofiny mikasika ny Zimbaboe “vaovao” sy manapariaka izany : In addition to inviting email contributions, we also asked our many SMS subscribers what a new Zimbabwe looks like to them. Read some of their ideas below, and...
Zimbaboe : Ny antony mbola tsy ankalazanay
Comrade Fatso [ny kamarady Fatso] monina any Zimbaboe no manazava ny antony mbola tsy ankalazandry zareo Zimbaboeana [ny valin'ny fifidianana] : We didn't erupt into celebration yesterday. Foreign journalists and activists expected us to be jubilant, drunk with joy. But for us it's not over until this entire house is...
Zimbaboe : Tsy diso ve ireo fantsona fampahalalam-baovao raha ny mikasika an'i Mugabe ?
Nick van der Leek monina any Afrika Atsimo no manontany tena raha tsy diso ireo fantsona fampahalalam-baovao raha ny mikasika an'i Mugabe ? Raha mihevitra ireo tatitry ny fifidianana any Zimbaboe : Sorry guys, I haven't seen any signs that Robert Mugabe is about to step down. So I also...
Qatar : tanin’ny lozam-piaramanidina mpiady Amerikana
Tselatra · Amerika Avaratra05 Avrily 2008
Emgee ao amin’ny Qatar Living (miaina i Qatar) no manome rohy amin’izay tantarain’i Al Jazeera izay milaza fa: “Nisy fiaramanidina mpiady Amerikana iray tra-doza tao amin’ny tobim-pamaharana tao al-Udeid any Qatar. Nanana olana ara-teknika ilay mpandatsaka baomba B1 teo ampidinana ary nipoaka raha vao nikasi-tany tao amin’ny toby miaramila izay...
Ao amin’ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Fandriampahalemana’, no ankalazan’i PValente [pt] ny tsingerintaona niverenan’ny fandriampahalemana tamin’ny 04/04/2002 tao Angola taorian’ny fitsaharan’ny ady an-trano, ary dia navoakany koa ny sarin’ny T-shirt ‘ahatsiarovana ny fahaenintaonan’ny andron’ny fandriampahalemana sy ny fampihavanam-pirenena tao Angola.’
Lazain’i Bahraini [Fa] fa sivanin’ny mpitondra ny vohikalam-baovaon’ny Shia Iraniana ( foibem-pampahalalam-baovao ho an’ny shiita) nefa tsy misy manazava ny anton’izany. Ampian’ny mpamaham-bolongana moa fa nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny asany ny mpitantana ny vohikala. Indreto misy saripikan’ny fotoampisokafan’ny Vaovaon’ny Shia.